M/weyne Gaas oo ganacsatada ugu baaqay inay maalgashi ku sameeyaan deegaanada Puntland – Radio Daljir
M/weyne Gaas oo ganacsatada ugu baaqay inay maalgashi ku sameeyaan deegaanada Puntland
Luulyo 23, 2015 3:55 b 0
Khamiis, Luuliyo 23, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo safarku jooga dalka Kenya ayaa kulamo la qaatay ganasatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda deegaanada Puntland isagoona kala xaajooday arrimaha ganacsiga iyo maal-gashiga.
Ganacsatada Soomaalida ah ee Kenya iyo Madaxweynaha Puntland oo kulan qado ah wada qaatay ayaa si durugsan uga wadaxaajooday arrimaha gaancsi ee dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo siyaabaha ganacsatadu maal-gashiyo ugu samayn karaan gudaha dalka.
Madaxweyne Gaas waxaa uu ganacsatada u sheegay in xiligan xukuumaddisu ku howlan tahay dadaalo ku aadan sidii loo xoojin lahaa ganacsiga iyo dhaqaalaha Puntland, iyadoo dowladdu dadaalka ugu badan gelisay kobcinta iyo dhismaha kaabayaasha shaqaalaha deegaanada Puntland.
Ganacsatada ayaa dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin gaal-gashiga guud ahaan geyiga Soomaaliyeed iyo meelkasta oo ay si xor ah ugu shaqaysan karaan ee kamid ah gudaha dalka.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa marar badan ku cel-celiyey in xukuumaddiisu xoogga saarayso dhismaha kaabayaasha shaqaalaha iyo dhismaha wadooyinka isku xira magaalooyinka waaweyn ee gudaha deegaanada Puntland.
Wasiirka Gaashaandhiga oo sheegay inuu sii socon doono howlgalka lagu qabtay Baardheere
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Khamiis_24